Pennyworth (2019) Season2Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
TMDb: 8/10 195 votes
Created byBruno Heller
StarringBen Aldridge, Dorothy Atkinson, Edward Hogg, Emma Paetz, Harriet Slater, Ian Puleston-Davies, Jack Bannon, Jason Flemyng, Jessye Romeo, Paloma Faith, Polly Walker, Ramon Tikaram, Ryan Fletcher
Synopsis of Pennyworth (2019) Season2Complete
ကတြျောတို့ အခဈြတျောကွီး ဆွာဘတျ(ဘတျမနျး)(Bat Man)မ မှေးခငျ သူ့ရဲ့ အဖေ သောမတျဈဝိနျး နဲ့
ခတျေသဈ ဘတျမနျးမှာ ဘတျမနျးရဲ့ သစ်စာရှိ ဘဏ်ဍာစိုး အယျဖရတျတို့ရဲ့ ဇာတျလမျးအကွောငျး တှရေိုကျကူး
‌တငျပွထားတာဖွဈပါတယျ…ဒီဇာတျလမျးက comic book မှာ နာမညျကွီးခဲ့ပွီး ယခုအခါ DC ကနေ series အနေ နဲ့ ရိုကျကူးတာပဲ ဖွဈပါတယျ…
ဇာတျလမျးက ၁၉၆၀ ဝနျးကငျြကာလ ဖွဈပွီး ဘတျမနျး ရဲ့ သစ်စာခံ အယျဖရတျ ကို လူငယျဘဝ အနေ နဲ့
တှမွေ့ငျရမှာ ဖွဈပီး သူက ဘဏ်ဍာစိုး တဈယောကျမဟုတျသေးသလို…ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ ဘတျမနျး
အကွောငျးလဲ မပါပါဘူး(မှေးမှ မမှေးသေးတာကို:3)
ဇာတျလမျး အကဉျြးခြုပျ ပီးပွောရ ရငျ အသကျ၂၆ နှဈအရှယျ ရှိတဲ့အယျဖရတျက ၁၀ နှဈကွာ စဈမှုထမျးပီး
နောကျ လနျဒနျ မွို့မှာ လုံခွုံရေး နဲ့ဆိုငျတဲ့ စီးပှားရေးကို စလုပျဖို့ အတှကျ နိုကျကလပျ တခုမှာ သူကိုယျတိုငျ
လုံခွုံရေးဝငျလုပျပါတယျ..အဲ့မှာ ဘတျမနျးရဲ့ အဖေ ဖွဈလာမယျ့ ဝိနျး နဲ့ တှခေဲ့ပါတယျ…ပီးတော့ သူ့ရဲ့
ကောငျမလေး ကိုလဲ ရခဲ့ပါတယျ..လနျဒနျမွို့မှာလညျး ဖကျဒရယျစနဈ တှေ ဆိုရှယျလဈ စနဈ တှနေဲ့ အုပျခြုပျခငျြ တဲ့သူတှေ
သူတလူငါတမငျး နဲ့ သိပျတော့ မငွိမျးခမျြးလှပါဘူး….အယျဖရတျ ကငယျရှယျ တကျကွှ ပွီးတော့ စဈမှု ထမျးစဉျကလဲ ဆုတံဆိပျတှေ
ရခဲ့တဲ့ သူပါ..အဲ့တာနဲ့ သူ့ကို မကျြစိကြ ပွီး သူ့အတှကျ နရောတှရေလာပါတယျ…ဆိုတော့ဆိုတော့
ဒါငျးပွီး ဆကျလကျ ရှုစားကွပါ…….
IMDB လညျး 8.2 ထိရထားတယျဆိုတော့ ကွညျ့သငျ့တဲ့ Serie ထဲမှာပါတယျဗြ
ဒီ Series ကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Rashida ဖွဈပါတယျ
ကျတော်တို့ အချစ်တော်ကြီး ဆြာဘတ်(ဘတ်မန်း)(Bat Man)မ မွေးခင် သူ့ရဲ့ အဖေ သောမတ်စ်ဝိန်း နဲ့
ခေတ်သစ် ဘတ်မန်းမှာ ဘတ်မန်းရဲ့ သစ္စာရှိ ဘဏ္ဍာစိုး အယ်ဖရတ်တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကြောင်း တွေရိုက်ကူး
‌တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်…ဒီဇာတ်လမ်းက comic book မှာ နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး ယခုအခါ DC ကနေ series အနေ နဲ့ ရိုက်ကူးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဇာတ်လမ်းက ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်ကာလ ဖြစ်ပြီး ဘတ်မန်း ရဲ့ သစ္စာခံ အယ်ဖရတ် ကို လူငယ်ဘဝ အနေ နဲ့
တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပီး သူက ဘဏ္ဍာစိုး တစ်ယောက်မဟုတ်သေးသလို…ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဘတ်မန်း
အကြောင်းလဲ မပါပါဘူး(မွေးမှ မမွေးသေးတာကို:3)
ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းချုပ် ပီးပြောရ ရင် အသက်၂၆ နှစ်အရွယ် ရှိတဲ့အယ်ဖရတ်က ၁၀ နှစ်ကြာ စစ်မှုထမ်းပီး
နောက် လန်ဒန် မြို့မှာ လုံခြုံရေး နဲ့ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေးကို စလုပ်ဖို့ အတွက် နိုက်ကလပ် တခုမှာ သူကိုယ်တိုင်
လုံခြုံရေးဝင်လုပ်ပါတယ်..အဲ့မှာ ဘတ်မန်းရဲ့ အဖေ ဖြစ်လာမယ့် ဝိန်း နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်…ပီးတော့ သူ့ရဲ့
ကောင်မလေး ကိုလဲ ရခဲ့ပါတယ်..လန်ဒန်မြို့မှာလည်း ဖက်ဒရယ်စနစ် တွေ ဆိုရှယ်လစ် စနစ် တွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ချင် တဲ့သူတွေ
သူတလူငါတမင်း နဲ့ သိပ်တော့ မငြိမ်းချမ်းလှပါဘူး….အယ်ဖရတ် ကငယ်ရွယ် တက်ကြွ ပြီးတော့ စစ်မှု ထမ်းစဉ်ကလဲ ဆုတံဆိပ်တွေ
ရခဲ့တဲ့ သူပါ..အဲ့တာနဲ့ သူ့ကို မျက်စိကျ ပြီး သူ့အတွက် နေရာတွေရလာပါတယ်…ဆိုတော့ဆိုတော့
ဒါင်းပြီး ဆက်လက် ရှုစားကြပါ…….
IMDB လည်း 8.2 ထိရထားတယ်ဆိုတော့ ကြည့်သင့်တဲ့ Serie ထဲမှာပါတယ်ဗျ
ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Rashida ဖြစ်ပါတယ်
ProductionDC Entertainment, Primrose Hill Productions, Warner Bros. Television, Warner Horizon Television
Firt air date2019-07-28
Home PagePennyworth (2019) Season2Complete